Ogaden News Agency (ONA) – Markaan daawanay doodii Xogmaal ee StarTV
Markaan daawanay doodii Xogmaal ee StarTV
Posted by ONA Admin	/ April 25, 2014
Ugu horeyn waxaan qirayaa inuu ahaa dood aad u fiican isla markaana ay labada qof oo doodahayay si aan looga baranin Somalida u ilaalinayeen anshaxa dooda iyo inay su’aalaha uga jawaabaan si midwalba uu doonayay inuu gaadhsiiyo fikirkiisa inta dhagaysanaysa. Waxaase aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in aan wax ka idhaahdo su’aalo badan oo nalaga soo weydiiyay laba arin ood moodo inuu Daahir Macallin Xuseen aad ugu soo celceliyay amaba aan dhehee uu ku qaraacayay darafka kale, anagoo siday u tahay taariikh ahaan iyo cilmi ahaanba jawaabo kooban uga bixin doona.
Midda 1aad wuxuu Daahir kusoo celceliyay in magaca Ogaden uu yahay mid qabiil taasoon filayo inuu ula jeedo in aan lagu wada halgami karin. Anigoo aad usoo dhaweynaya dood celintii mudane Tamuuje ee ahayd inuusan jirin caalamka shacab u wada dhan halgan gobanimadoon oo hubaysan, iyo in xubnaha ONLF ay ku dhan yihiin Somalida dagan dalkaa gumaysiga ku jira, hadana waxaan hoosta ka xariiqayaa inay Somalida arintaa ku dooda ay aad ugu cadaadinayaan ONLF inay noqoto jabhad qabiil, taasoo ah sida ay jeceshahay Itobiya, taasoo hadday dhacdo aanay sii waareynin ONLF sababtoo ah ma jiro qabiil u dagaalami kara dan umadeed iyadoo aynu ogsoonahay inay Itobiya ku kala dirtay qarankii Somaliyeed jabhado iyo maamulo qabiil ku dhisan. Hadaan intaa ka gudbo, waxaa nasiibdarra ah qof loo sheegay inuu yahay aqoonyahan Somaliyeed oo waliba ka mid ah dadka Somaliyeed ee daga Ogadenya inuu garan waayo ama iska indha tiro in magaca Ogadenya aanu ahayn magac ay ONLF dalka u bixisay isla marahaantaana yahay magac caalamka u yaqaano dalkaa oo la bixiyay waqtigii Afrika oo idil loo magac bixinayay.
Yaa Qoray Khariidadan, Goormaase La qoray?
Arinta 2aad ee u baahan in la’is dul taago waa ereyada uu Daahir kusoo celceliyay ee ahayd in ONLF xukunka gobolka qabsatay, markii lagaga adkaadayna ay cadha darteed duurka u galeen, isagoo sheegay inay muujinayso arintaasi inay ONLF xukun qabiil u duday doonaysana. Waa arin ceeb ku ah isla marahaantaan muujinaysa in darafka ereyadaa ku hadlay uusan cadaalada u iilan, hadafkiisuana ahaa un inuu dooda ku quruxsado, waa hadaan dhanka fiican ka eegno.
Talaabooyinkii uu qaaday ururka TPLF ee xukunka qabsaday cidwalba way ogsoon tahay ee cahdigii la dhigtay ee loo yaqiinay (Transitional Charter) uu ku baabi’iyay. Daahir haduu yahay nin aqoonyahan ah waxay ahayd inuu qiimeeyo taariikhda. ONLF xukunka waxay ku haysatay hab dimoqraadi ah oo doorasha xor ah oon waligeed ka dhicin Ogadenya sida ay qireen dhamaan dadkii goobjooga ka ahaa, iyadoo waliba ay Itobiya xooga saartay inay ONLF ka yeelato xubnaha baarlamaanka waxaan ka badnayn 15%. Waxaa arintan si fiican wax uga qoray qoraaga Daahir Maxamad Cali (Baasto) oo yidhi;
Jabahadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya (ONLF) oo muujineysa dulqaad siyaasadeed waxay indhaha ka laabatay dhammaan xadgudubyadaas aan soo sheegnay si ay u hanato dareenka shacabkeeda oo qaar badan oo ka mid ah dhagaha looga buuxiyey waxyaabo runta ka fog, arrintaasuna waxay kalliftay in ay jabhaddu xaqiijiso laba qodob oo muhiim ah iyadoo waliba hor istaagyo badan kala kulmeysay dhinaca hogganka sare ee TPLF, waxayna labadaas qodob kala ahaayeen: waa kan horee waxay ku guuleysteen hirgalintii iyo meel marintii ololihii doorashada. Iyo qodobka labaad oo ahaa dhismihii baarlamaannada heer qoomiyadeed iyo heer deegaan. EPRDF oo u arkeysay ku guuleysashada ONLF ee labadaas qodob ee aan soo sheegnay in ay tahay arrin ka hor imaaneysa maslaxadeeda gaarka ah waxay intii awooddeeda ah ku dadaashay in ay minjo xaabiso maamulkii baarlamaanka qoomiyadda soomaalida ee ay jabhaddu hoggaamineysay, arrintaasuna waxay saldhig u noqotay is faham la’aan dhex marta maamulkii qowmiyadda iyo golahii wakiillada dowladda dhexe ee ay awooddiisa hayeen Melles iyo kooxdiisa.
Akhri Taxanaha SomaliTalk.
Ugu dambayn, waxaan bogaadin u dirayaa StarTV iyo gaar ahaan warihiii daadihinayay dooda oo ahaa shaqsi aqoon saxaafadeed muujiyay iyo dulqaad.